Mitambo, 01 Chikumi 2017
China 1 Chikumi 2017
Chikumi 01, 2017
Caps United Yosangana neAl Ahly Tripoli neChishanu muHarare
Muongorori wemutambo wenhabvu, VaFarai Kambamura, vanoti kukurumidza kusvika kwakaita vashanyi ava muZimbabwe kunoratidza kuti hapana chimwe chavari kufambira kunze kwemapoinzi matatu.
Chivabvu 26, 2017
Vadzidzi paUZ Voratidza Mifananidzo Inodonongodza Hupenyu hwaNhasi
Vadzidzi gumi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuratidza mifananidzo yakasiyana-siyana inoratidza mararamiro ari kuita veruzhinji munyika panguva iyo hupfumi hwenyika huri kuenda kumawere.
Chivabvu 24, 2017
Nyaya yeKudoma Mwana waVaMugabe muCensorship Board Yokonzera Mutauro
Kudomwa kwebhodhi idzva rekupepeta zvinobuda munhepfenyuro nemunganonyorwa kana kuti Censorship Board rinosanganisira mwanasikana wemutungamiri wenyika, Amai Bona Mugabe-Chikore, kwakonzera mutauro wakanyanya munyika.
Chivabvu 23, 2017
Caps Ingarove USM Alger Here kuNational Sports Stadium Mumakwikwi eCAF Champions League?
Vatsigiri chikwata che Caps United vane chivimbo chekuti chikwata chavo chichashandisa maziviro achinoita nhandare yeNational Sports Stadium kurova chikwata chiri kushanya cheUSM Alger chekuAlgeria mumutambo wavo weGroup B yeCaf Champions League nemusi weChitatu masikati.
Chivabvu 22, 2017
Vadzidzi paMSU Vowanirwa Nzvimbo Yekuitira Mitambo neKupana Mazano
Mumwe mudzidzi wepaMSU akawana zvidzidzo pamusoro peHIV/AIDS uyo achange achidzidzisawo vamwe vadzidzi, Hastings Tengende, anoti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchabatsira mukuchengetedza hutano hwavo.
Chivabvu 19, 2017
Vatengesi veHove Voita Mari Panotamba ZPC Kariba Pamba
Vanotengesa hove vanoti pamasvondo maviri pamwedzi anotambwa mbora muKariba vanowana mari inosvika mazana masere emadhora kana zvichienzaniswa nemamwe masvondo maviri apo vanowana mari inosvika madhora mazana maviri chete.
Chivabvu 18, 2017
Vanokonzera Mhirizhonga Mumutambo weNhabvu Ngavasungwe, Vazhinji Vokurudzira
Vanofarira nhabvu semutambo wekuvaraidza vanoti vari kukonzera mhirizhonga kumitambo vanofanira kukandwa mujeri kuitira kupedza nyonga nyonga yanetsa mumutambo uyu kwete kuripisa zvikwata.
Chivabvu 16, 2017
Hurumende Yoronga Kudzora Dhora reZimbabwe Muchivande?
Gurukota rinoona nezvehupfumi, mapazi ose ane chekuita nemafambisirwo ezvehupfumi kusanganisa remigohi nerekutengeserana uye bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe atanga kuita nhaurirano nevemabhizimisi vachizeya nyaya yekudzora dhora remunyika kana kuti Zimdollar.
Chivabvu 03, 2017
Vakawanda Vovaraidzwa neMitambo yeHIFA
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi, chirongwa cheHIFA chamutsa zvakare guta reHarare apo vanofarira zvemitambo vari kuvaraidzwa.
Zanu-PF Inoti Gadziriro yeMusangano Wayo wePagore Yasvika paDanho rePamusoro Soro
Vanhu Vokurudzirwa Kuti Vangwarire Kurumwa neNyoka Mwaka Uno
Mhuri yeGweta Rakapondwa kuGweru Inoti Inoda Kuti Nyaya Iyi Itongwe
VaBiti Vomiswa Pamberi peDare
VaMnangagwa Vovimbisazve Kuti Ongororo yaVaMothlante yeKupfurwa kweVanhu Ichaziviswa veRuzhinji